Otu esi eme katapila ụmụaka ji egwuri egwu - Ikkaro
Inicio >> Hapu Cómo >> Ihe egwuregwu ụmụaka
Ka anyị hụ otu esi eme nke a dị mfe katapila umuaka eji eji akwa na osisi ice cream eme. Ezubere ya maka ụmụaka. Na-ewepụta oge soro ha na-ewu ya ma na-akpọ launching dị iche iche ụdị projectiles.
Anyị ga-eji ohere ịkọwa echiche dị iche iche na data gbasara pusi na akụkọ ntolite na agha dabere na afọ nwata ahụ.
2 akwa akwa osisi
Mkpịsị aka 2 (obosara, dị ka nke dọkịta)
mama (ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume thermal mama)
Ngwongwo roba 2, nke siri ike ka mma
Arụrụ ụlọ catapult site na nzọụkwụ
Anyị ga-ahapụrụ mkpara osisi n’elu tebụl ma rapara tweezers na osisi nke abụọ dị ka anyị hụrụ na onyonyo a
Ozugbo ọ kpọrọ nkụ, anyị ga-agbanye okpu 1cm site na njedebe nke mkpisi 2nd. Anyị na-ahapụ ebe a dị anya iji nwee ike ịkwanye ya nke ọma ma emechaa. N'ụzọ dị otú a mkpịsị aka anyị ga-ejidekwu nke ọma
Iji malite, anyị na-etinye ihe oru ngo nke anyị ga-eji na nkwụsị ma jiri otu aka jide osisi nke dị n'ala ma jiri aka ọzọ anyị gbadoo ma hapụ ya na mberede
Hụ otu esi emeghe ma ọ gbanwee. Ike na-agbakọta na ebe 3 dị iche iche:
na usoro nke mwepu onwe ya nke nwere imechi,
na eriri na-agbanwe agbanwe nke na-ejikọ clamps ọnụ
ke ekwe nke osisi
Kedu oru ma obu mgboagha eji
Kpachara anya banyere ihe ị na-atụfu. Ọ bụrụ na ịnọ n'ụlọ, jiri ihe na-anaghị atụ ka bọl nke aluminium. Nke a dị mma.
Ọ bụrụ na ị ga-atụba okwute, ọmarịcha ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, hapụ ya ka ọ bụrụ oghere ma onweghị onye ga-abanye ya. Tụfuo ihe siri ike karịa ka ị chere. N'ezie. Ọ bụ obere nzuzu nzuzu mana ọ nwere nnukwu ike. Karịrị anya. Ka ha gwa m ụlọ m.
Rọba n'aka ekpe na nke dị n'etiti na-enyere aka ime ka ike dịkwuo ike, nke dị n'aka nri na-ewepu n'ezie, mana nke ahụ bụ otú ụmụ m nwanyị si gbaa nke ọma. Ọ bụrụ na ọ bụghị ntakịrị nke nchịkwa, ọ bụ ihe gbasara gị na-agbalị.
Nke a bụ nsonaazụ ikpeazụ.
Dị ka projectile, Achọrọ m iji bọl nke aluminum foil, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnwale ihe dị iche iche. Kpachara anya ma ọ bụrụ na ị na-eji marble ma ọ bụ ihe ndị dị arọ dị ka ọ nwere ike karịa ka ọ dị.
Kedụ ihe anyị nwere ike ịkọwara ha dịka afọ ha siri dị?
Akụkọ banyere catapults, sieges, ballistics, ịgba égbè,
Ọ bụ igwe agha nke na-echekwa ike iji bufee ya na ọrụ ya.
Ndị Greek bụ ndị mbụ mepụtara katapila mbụ na 399 BC, nke ndị Carthaginians mepụtara ma bụrụkwa ndị Rome zuo oke, bụ ndị mere ka ha bụrụ ngwa ọgụ mbibi n'ezie na mbuso agha.
Anyị ekwuola banyere ụdị catapul ndị ọzọ na blọgụ ahụ ma ana m arụ ọrụ na ọtụtụ ọdịnaya
Arụrụ n'ụlọ Trebuchet
Kemgbe ahụ, ejirila ha ma gbanwee na narị afọ niile ruo narị afọ nke XNUMX. Kindsdị ihe ndị a niile e mepụtakwara. Mana anyi ga ahapu akuko banyere katapila maka edemede puru iche nke m na akwado.
Atapgbọ mmiri Roman nwere ike gbaa okwute iri atọ site na 30 m.
Nyocha maka ndị mbido. Akwụkwọ akụkọ LIBSA
Nkà nke catapult. William Gurstelle
Categories Hapu Cómo Igodo bọtịnụ
Obere Centaura, ihe omimi nke uwa
1 Arụrụ ụlọ catapult site na nzọụkwụ
2 Kedu oru ma obu mgboagha eji
3 Kedụ ihe anyị nwere ike ịkọwara ha dịka afọ ha siri dị?
4 Banyere katapila
5 Isi iyi